အားလုံးအလိမ်ခံရပြီ၊ ရမ်ဗြဲမြို့ကျောက်နီမော်ကျေးရွာတွင် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူထက်ထက်သည် ရခိုင်လူမျိုးဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်သည်၊ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အားလုံးအလိမ်ခံရပြီ၊ ရမ်ဗြဲမြို့ကျောက်နီမော်ကျေးရွာတွင် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူထက်ထက်သည် ရခိုင်လူမျိုးဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်သည်၊
အားလုံးအလိမ်ခံရပြီ၊ ရမ်ဗြဲမြို့ကျောက်နီမော်ကျေးရွာတွင် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူထက်ထက်သည် ရခိုင်လူမျိုးဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်သည်၊
Posted by Yel Kaung on Jun 8, 2012 in Copy/Paste | 41 comments
ွှအဲဒီ အတိုင်း မှန်ရင် တောင်ဂုတ် ကားပေါ် က လူ ဆယ်ယောက် ကို သတ်တဲ့ အထဲ မှာ လဲ ရခိုင် အယောင် အဆောင် ရိုဟင်ဂျာ တချို့ ပါ မှာ သေချာ တယ်။
အလိမ်ခံရအောင် ကျုပ်တို့ကို ငတုံးတွေများမှတ်နေလို့လား…
မင်းတို့ကုလားတွေ စောက်ရမ်း လွန်သွားပြီကွ
မင်တို့ ဘင်္ဂလားက လ၀က ကိုပိုက်ဆံပေးခိုးဝင်တဲ့သူတွေ
လက်ရှိ အစိုးရကို ဆန်ကျင်တိုက်ခိုက်တာပဲ
အစိုးရ က မင်းတို့ကိုဘာလုပ်မလဲ စဉ်းစားပေါ့။
ဟေ့ လူမျိုးကို မုန်းနေတာ မဟုတ်ဘူးကွ ..
မုဒိန်း လူသတ်ကောင်ကို မုန်းနေတာ ..
ခြေမ မကောင်း ခြေမ လက်မ မကောင်း လက်မပဲ …
ဒီကောင် ကုလားဖြစ်လို့ ကုလားအကုန်လုံးကို မမုန်းဘူး ..
ရခိုင်ဖြစ်လို့လဲ နေပါစေလို့ ထားမယ် မထင်နဲ့ …
တစ်ဦးတစ်ယောက်လုပ်တာကို လူမျိုး ဘာသာ နဲ့ လာမရောနဲ့
မှန်လိုက်တာ ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ် အရေးယူရမယ်။
ညစ်ပတ် လေး says:
“လူမျိုး” လို့ ပေါင်းပါကြောင်း ရယ်ပါလေ။ နောက် .. မျီူး အစား .. မျိုး လို့ ရေးသင့်ကြောင်း ..
အရေးထဲတမှောင့်…အီးမီဒီယာခေတ်ရောက်နေပြီ ကိုယ့်လူရေ…ကျောက်ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ထင်နေလား…လကမ္ဘာပေါ်မှာဟိုတယ်ဆောက်နေပြီ။ wake up man.
အော် ခက်တော့မယ် … သတင်းဆိုတာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဖူးဗျာ … တစ်ခုက ဖွတယ်ထားဦး ကျန်တဲ့ သတင်းတွေကကော အမှန်တော့ဘူးလား …. ခင်ဗျားပြောသလိုဆို ကျူပ်တို့ပဲ ငအ တွေဖြစ်တော့မယ် .. သတင်းတင်တဲ့သူတွေကလည်း ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေတော့မယ် အမှန်တကယ်က ရွှေလည်း နှစ်ကျပ်သား မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကျပ်သားလို့ပဲ ဖတ်မိတာပါ … ချမ်းသာတိုင်း စက်ချုပ်မသင်ရတော့ဘူးလား … ကျန်တာတော့ ဆက်စဉ်းစားတော့ပေါ့ဗျာ ….
ကျွန်တော် ဂေဇက်တွင် စာများကိုသာဝင်ဖတ်ပါတယ် ကွန်မင့်ရေးခဲပါ တယ် သို့ ဖြစ် ရ်ျ ဘယ်သူက ဘယ်သူဟု မသိ ပါ သို့ သော် ယခု တလောတွင် ကုလားများဖက်မှ ကလိန်ကကျစ် ဖြင့် သတင်းမှားများပြန်တင် ခြင်း ဖတ်သူများ သို့ လောသို့ လော ဖြစ်စေသော ရေးသားမှုများဖြင့် ကလေး ဥာဏ်ဖြင့် လုပ်နေ သည်များတွေ့ ရရ်ျ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ထ ရေးလိုက်တာပါ ဟိုတနေ့ ကခေါင်းစဉ်သာဖတ်လိုက်ရသော ပိုစ်တခု က တောင်ကုတ် တွင် ဖြစ်ပွါးမှုအားမဆိံမဆိုင် ဘုန်းတော်ကြိံးများကို ဆွဲထည့်ုခြင်း လုယက်သည်ဟုထည့်ရေးခြင်း သူတို့ လူမျိုးများကို သနားစဖွယ်ဖြစ်အောင်ရေးခြင်း ယခု တဖန် လည်း နိုင်ငံတော် မိံဒိံယာများမှ အတိအကျ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသောထက်ထက်ဘေးတွင် ကုလား နာမည် အဖ ဥိံးကျော်သောင်းဘေးတွင် ကုလားနာမည်ပါ ပါ လျက် မူစလင် ကုလား များကို ကုလားကျင့်ကုလားကြံ ( ကလိန်ကကျစ်) ဖြင့် ရ ခိုင်လူမျိုး ဟူ ရ်ျးဗုဒ္ဒဘာသာ ဟု ဓ နေ ရာ တွင် ဒ ကို စာလုံးပေါင်း မှားပေါင်းသူ သည် ဘာ လူ မျိုးလဲမေးစရာ လို မည်မထင် ပါ ထက်ထက် ဧ။် ရုပ် သည် ကုလားရုပ် သိပ်မထွက် သည်ကို အခွင့်ကောင်းယူရ်ျ ရ သော်လည်းကြံရာ ပါနှစ်ကောင် သည်ကုလားရုပ်စစ် စစ်ကုလား နာမည်များနှင့် ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်အပါ အဝင် ဂေဇက်မှသူများသည် သတင်းကို ဒိံတခုထဲဖတ်သူများမဟုတ်ပါ။ အစုံဖတ်သူများဖြင့်သဖြင့် ကလေးအထာများဖြင့် ဂေဇက်တွင် လာရှုပ်နေ သူများကို ရှင်းလင်းသင့်ပါသည်။ တစ် ဥိံးထဲကလဲ ခါတော်မိံအကောင့်များဖြင့် ဝင်ရောက်ရေးသားခြေ ရှုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့အမြင် ကို ရေးတာပါ မည်သူနှင့်မှမရင်းနှိံးသည့်အတွက် ဘယ်သူက အမာခံ ဘယ်သူ က ခါတော်မှိံ လဲ တော့မသိပါ
ချင်းလေး (တောင်ပေါ်သား) says:
ဘယ်ဟာကိုယုံရမှာလဲ အခုလောလောဆယ်တော့ မောင်တောမှာပွဲကြမ်းကုန်ပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ဟေ့ ဒီ ပို့(စ်)ရေးတဲ့ကောင်……
မင်းတို့ ရေးထားတာတွေအားလုံးကောမဖတ်ဘူးထင်နေလား(မင်းအဖေ ဆိုဒ်တွေ)
အဲဒါပြောတာပေါ့မိုးတိမ်ရာ… ဘယ်ကချီးကုလားက…ကြောက်လန့်ပြီး.. .လျှောက်တင်တာလဲမသိပါဘူးကွာ. .ဖေ့ဘွတ်..မှာတော့..ပွစာကျဲနေတာ… မသိကြဘူးထင်နေလားမသိဘူး… ကန်တော့ပါရဲ့နော်…အားလုံးကို.. .ဒီသတင်းတွေကရှင်းရှင်းပြောရရင်…အပြာကားတင်တဲ့ဝပ်ဆိုဒ်
တွေမှာတောင်.. ဘာမှမဆိုင်ပဲ.. ပါနေပြီဆိုတာပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာ
လာကြည့်လိုက်…. ရွှေ ၂ ကျပ်သားမပြောနဲ ၁၀ လောက် ၀တ်နေတာတွေ အများကြီးပဲ…။ စက်ချူပ်သင်တယ်ဆိုတာ ဆင်ရဲငတ်ပြတ်နေမှ သင်ရတာလား..။ ပိုက်ဆံမရှိပဲနဲတော့ စက်ချုပ်သင်လို့မရဘူး ကိုယ့်လူ…။ စက်ချုပ်သင်ခ ဘယ်လောက် ကုန်ကျသလဲ အရင်လေ့လာလိုက်အုံး…။
အင်တာနက်ပေါ်ကသတင်းတိုင်းကို အမှန်ဆိုပြီးလက်ခံနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးဟ။ စဉ်းစားတတ်တဲ့သူတွေချည်းပဲ ။
ဘ၈င်္လီ ဟုတ်မဟုတ် လ၀ကမှာ စါ၇င်း၇ှိတယ် ဘာမှ ပြောစ၇ာ မ၇ှိဘူး တ၇ား၇ုံးကဆုံဖြတ်လိမ်မယ်
ဒီလိုအခြေမြစ်မ၇ှိတဲ့ ပို့စ်မျိုးကိုမတင့်သင့်ဘူးလို့အကြံပြုပါ၇စေ မိတ်ဆွေ ပြသာနာကသူပာာနဲ့သူအချိန်တန်၇င်းပြီးသွားမှာပါ ဒါအစိုး၇နဲ့တာဝန်၇ှိသူတွေ၇ဲ့တာဝန်ပါ။ကျွန်တော့်တိုလိုပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအတင်းသတင်းတစ်ခုအနေနှင့်ပဲပြီးသွားမှာပါ။ ဖြစ်နိင်၇င်ဘာမှဝင်မပါပဲ သတင်းshare ဒါလောက်ပဲသင့်တော်ပါတယ်။ ပာိုပာာဖြစ်တယ်ဒီပာာဖြစ်တယ်ပြောယုံနဲ့ယုံတဲ့ခတ်လည်းမပာုတ်တော့ပါဘူး။ အချိန်ကုန်ခံပြီးစုံစမ်းစ၇ာလဲမလိုပါဘူး။နိင်ငံတိုးတက်ဖို့အများကြီးလုပ်နေချိန်မှာ Foreign Investor တွေကဒီလိုမငြိမ်မသက်တွေနဲ့ အာ၇ိုက်နေကြ၇င် လာေ၇ာက်၇င်းနှီးမြုပ်နှံဖို့တွေဝေသွား၇င် ကျွန်တော်တို့လိုအခြေံခံလူတန်းစားတွေ အလုပ်၇နိင်မှူ 80%ခန့်ကျသွားနိင်တာကိုသိပါလားမိတ်ဆွေ…………သိခဲ့မယ်ဆို၇င်အတင်းမဖျင်း အာဘော်တွေမတင်ပါနဲ့လို့ request လုပ်ပါ၇စေ
အမှားလုပ်အနုမြူလက်နက်မရှိဘဲရှိတယ်ဆိုပြီးဓါတ်ပုံအတုတွေလုပ်ပြီးအီရတ်ကိုတိုက်ခဲ့တာ ၊ခင်ဗျားတိုအင်တာနက်သတင်းမနေတနေကမှသုံးတတ်သေးတာ၊ခင်ဗျားတို့fb သုံးတတ်တာလောက်တော့ခွေးဘိုးလပြသလောက်ဘဲရှိတယ်၊ဟိုနိုင်ငံကသုံးလာတာကြာပြီ၊လူမှန်ရင်သတင်းမှန်ကိုစုံစမ်းတတ်ပါစေ၊ခွေးလို့
သောက်ရူး မင်းကသတင်းသမားလို့ ခံယူရင်မင်းကိုယ်တိုင်ကျောက်နီမော်သွားခဲ့လို့ လား
နည်းနည်းလေး ၀ိုင်းဆော်လိုက်မှပဲ ဇာတိက ပြလာတာကိုး …
First time is Thida Htwe, Second time is your sisters.
ကိုယ့်ပေါင်ကိုသာ တတွေးစွတ်ပြီး ပြန်လိမ်လိုက်ပါတော့ ကလဒိန်ရေ့
ဒီလောက်သေချာနေရင် တရားရုံးမှာသက်သေသွားထွက်ပါလားဟေ။ ဒီမှာလာပြီး ၀ါဒဖြန့်မနေနဲ့။ အခုတရား ရုံးမှာရုံးတင်စစ်နေပြီလေ။ အဲသုံးယောက်က ရှေ့နေမငှားပါဘူးဆိုလို့ နိုင်ငံတော်က တရားမျှတမှု့ရှိအောင် အစိုးရရှေ့နေတောင်ငှားပေးထားသေး။ မောင်ထက်ထက်က ရခိုင်ဆိုရင်အခုလောက်ဆို တရားဝင်သိနေ ရလောက်ပြီပေါ့။ တရားခံကို သူတို့ biography အရင်မေးရတာပဲဟာ။ မဟုတ်လို့ပေါ့။ ရှင်သေချာတယ်ဆို ရင် သက်သေသွားထွက်မလား။ သွားလိုက်လေ။
Yel Kaung has written 1 post in this blog. မင်းပဲလိမ်နေတာဖြစ်မှာ။
ဘယ် user ကတော့ ဘယ် IP နဲ့ ဘယ် post ကိုတင်သွားတယ်။ ဘယ် user ဘယ် user ဘယ် user ကတော့ IP တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နိုင်ကြောင်း ချပြလိုက်လို့ကတော့ ဗျာ …
မပြောတော့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချူပ်ပြောခဲ့သလို သောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြပါ။
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ တိုက်မိခဲ့လျှင် နိုင်ငံခြားသားက ဆောရီးတဲ့၊ ဗမာက မင်းဘာကောင်လည်းဆိုပြီ ရန်ဖြစ်ကြတယ်၊ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ကို အရမ်းလှတယ်လို့ ပြောလျှင် နိုင်ငံခြားသူက သိုင်းကျုးတဲ့၊ ဗမာသူက ပါးကျိုးမယ်၊ ဟိုဟာစားတဲ့လေ……….သြော် ဒို့ဗမာတွေ ရှက်စရာကြီးကွာ။
ဟုတ်ပါတယ်…..ဒါတွေဟာ Daw AungSanSuKyi ပြေသလိုပါပဲ..နိုင်cံတော်မှာ Reliable law ၁ခု
၇ို၇င် အပျစ်၇ိုတဲ.သူကို ထိုက်တန်တဲ.အပျစ်ပေးလိုက် ၇င်ပြီးသွားနိုင်တဲ.case ၁ခုပါ…အချင်းချင်း
စာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေပါတယ်။ Su အစား Suu လို့ သုံးပါတယ်။ အပျစ် ဆိုတာက မှားနေပြီး .. အပစ် လို့ သုံးသင့်ကြောင်း နဲ့ ” ပြဿနာ ” လို့ စာလုံးပေါင်းပါကြောင်းနဲ့ “ရှိ” လို့ ရေးပါကြောင်း .. ဖတ်ပါ .. မှတ်ပါ .. ပြီးမှ တင်ပါ။
ဟေ့ကောင် ဒို့ ဗမာလို့ မသုံးနဲ့ ။မင်းစောက်ကုလားမှန်းအားလုံးသိတယ်။မြန်မာတွေကယဉ်ကျေးတာ၊ လူပီသတာနိုင်ငံခြားတိုင်ပြည်တိုင်းခုထိချီးမွမ်းတာ ။နိုင်ငံခြားမရောက်ဖူးတဲ့ ကောင်ရဲ့ ။ ခုတောင် ဘုရားတရားတော်အရ သည်းခံနေရတာ ၀က်ရဲ့ ။အေး ဒါပေမယ့် သည်းခံတာအတိုင်းတာကုန်နေပြီဆိုတာ မင်းတို့ ကုလားတွေသဘောပေါက်ထား။
ဖြူဖြူ၊မဲမဲ ပါ ဥပဒေချိုးဖေါက်သူအားလုံးကို ထိရောက်စွာ
မင်းအတင်းအဲ့မှာသွားတုတ်ရင် မင်းအဖေတွေ မင်းကိုဆုချလိမ့်မယ်
သခိုးကလူပြန်ဟစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ တောက်!! :angry:
အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းရအောင် စောက်ရူးတစ်ကောင်မှ မပါဘူး
Post တင်ပေးတဲ့သူ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် . ပြီးတော့ အမှန်တရားမြတ်နိူးသူလို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တွေးကြည့်မိတာလေး ပါ ..
အားလုံး အလိမ်ခံရပြီ .. တဲ့ .. ဟုတ်လား မဟုတ်လား? မသိချင်သေးပါဘူး ဒါ .. ခုချိန် အရေးမကြီးတာတော့ ပါဘူး ..
(အရေးလည်း ကြီးပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီလိုမျိုးတွေးမိအောင် လုပ်ပေးတာ ဒီ post တင်လိုက်လို့ .. သူများတွေလည်း ဒီလိုမျိုးတွေးမိကောင်းတွေးမိမှာပါ .. ဒါပေမယ့် ဒီ post သာ မတင်ရင် တွေးမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောရခြင်း .. )
ဒါထက်ပိုအရေးကြီးတာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ် က မြန်မာပြည် အတွက် ပိုကောင်းသွားဖို့ ပါဘဲ .. အလိမ်ခံရတယ်ဘဲထားပါ ..
ခုချိန် ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့် ရခိုင်တွေ က စစ်တပ်ကို အားကိုးချင်နေကြတယ် .. အားလည်းကိုးနေကြတယ် .. မြန်မာ့စစ်တပ်အတွက် မျက်နှာပွင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ တူတူပါဘဲ။
ခုချိန် မှာ BBC တို့ VOA တို့ကို သိပ်မယုံကြည်တော့ဘူး .. ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း သွေးစည်းလာကြတယ် .. ဒါလည်း အလွန့်အလွန်ကောင်းမွန်သောရလာဒ်ဘဲ လေ ..
ခုချိန်က မြန်မာ့တပ်မတော်၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ ပြည်သူတွေ သွေးစည်းဖို့သင့်နေတဲ့ အချိန်အခါဖြစ်နေပြီ .. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် လည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ပျက်စည်းဖို့ပဲကျန်တော့တယ် ..
ဒီတော့ အရင်ကအဖြစ်အပျက်တွေက လိမ်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အရေး မကြီးတော့ပါဘူး .. အရေးအကြီးဆုံးက ခုဖြစ်နေတာကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုလိမ္မာပါးနပ်စွာကိုင်တွယ် မလဲ .. ? နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဘယ်လောက်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ကို ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်နေပါပြီ .. ! ဒီတော့ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာကောင်းသည် ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ .. အနာဂါတ် အတွက် ပိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဘဲ အရေးကြီးပါတယ် လို့ ထင်ပါတယ် .. အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ကို ဆွတ်ခူးသင့်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေပါပြီ …
ကျွန်တော်တို့ ရွာသက်ရင့် ရွာသားတွေအနေနဲ့
ခင်ဗျားတို့ ဒီနေရာက ကီးဘုတ်ကလေးနှိတ်ပြီး အပြိုင်ဆဲ နေကြရုံနဲ့
ခေါင်းအေးအေး ထားကြပါ ကိုယ့်ညီတို့ရေ။
လှည့်ကွက်တွေကို မြင်အောင် ကြည့်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။
မောင်းတော သတင်းအမှန် ဖတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ရော …
ယခုပိုစ့်ရော ကိုရဲခေါင်ပဲ ရေးတာပါ ကလား..
သေချာစဉ်းစားရင် postရေးတဲ့ ကောင်နဲ့ ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေက မျိုးမစစ်ကုလားတွေ။၀က်နဲ့ လဒ အိမ်သာဝစပ်ကျထားတဲ့ အကောင်တွေ။
မင်း နှမ အစ်မ အမေ ၀ိုင်းမုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး လူမဆန် လည်လှီးခံရရင်လည်း သတင်းမှားလို့ မင်းပြောနိုင်မှာလား။ အဲဒီတချိန်လုံးအရှင်လတ်လတ်ငရဲကျခံနေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မျက်စိထဲမြင်ကြည့်စမ်း။ လည်လှီးတာငါတို့ မြန်မာမို့ မင်းတို့ လုပ်တာ ၀က် သားရဲ့ ။
မင်းမသိသေးရင်ငါပြောမယ်။ မုဒိမ်းကျင့်လည်လှီးရုံမကဘူး။ မိန်းမအင်္ဂါပါ ဓာနဲ့ မွှန်းသွားတာ မင်းတို့ ကုလားအသိုင်းအ၀ိုင်းကကောင်ကိုယ်တိုင်ငါ့ ကိုဝန်ခံထားတယ်။ မင်းဘာငြင်းချင်တာလဲ ။ငါတို့ ထဲမှာသက်သေခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်။မင်းတို့ တမျိုးလုံးခံရမယ့် အလှည့် မကြာခင်ရောက်တော့ မယ်။စိတ်ချ။
တိန် – ဟုတ်လှချည်လား ဟ –
ဘီလူးငို သရဲပြေးတင်မက ငါပါပြေးပြီဟေ့ – ဖွတ်ချက် – ဖွတ်ချက် – အဟွပ် -ဟွပ်